“Shaqadii Guddiga Maaliyadda waxaa faragelin ku heyso Xukuumadda” | allsanaag
“Shaqadii Guddiga Maaliyadda waxaa faragelin ku heyso Xukuumadda”
Xildhibaan C/xakiin Macalin Axmed oo ka tirsan Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ayaa sheegay in Xukuumadda inay faragelin ku heyso shaqadii Guddiga, kaddib markii shalay uu Guddoonka Baarlamaanka waxba kama jiraan ku tilmaamay, warbixintii Miisaaniyadda ee ay Guddiga soo bandhigay.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in wixii hada ka dambeeya aan warbixintaas la soo qaadi karin, isla markaana aan loo marin hab raacii saxda ahaa, waxaana raalli gelin uu siiyay Wasaaradda Maaliyadda.
Xildhibaan C/xakiin ayaa sheegay inay ku adkeysanayaan warbixinta Miisaaniyadda ay soo bandhigeen ee ku aadanaa musuq maasuqa iyo wax is daba marinta lagu sameeyay Miisaaniyadda, isagoo xusay in arrintaas Baarlamaanka u taalo hantida ilaalinteeda.
Waxaa uu sheegay in shaqada Guddiga ay faragelin ku heyso Xukuumadda,isla markaana loo ogeyn sidii ay tahay inuu u shaqeeyo Guddiga sida uu yiri.
“Shaqada Guddiga Xukuumadda ayaa faragelin ku heyso oo loo ogeyn inay u shaqeeyaan sida ay tahay, aniga ra’yigeena ayaa soo gudbineynaa illaa hadda waxaa taaganahay waa in wasaaradda Maaliyadda wixii la weydiiyo qoraal uga soo jawaabtaa, ee ma ahan in Guddiga la aflagaadeeyo, wixii aan soo gudbinay oo qoraal cad ah ayaa wasaarada ka rabaa, xisaab la isku daro oo la kala gooyo oo tiro lagu soo saaro ayaa ka rabnaa”ayuu yiri.
Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ayaa shalay ku kala qeybsanay warbixinta, waxaana xubno ka mid ah Guddiga ay ka qoreen qoraal tabasho ah warbixintaas oo ay sheegeen in aan loo marin habraacii saxda ahaa, isla markaana ay aheyd arrin aanay ogeyn.
← Afhayeenka Isimadda Jubbaland Mar marsiiyo ma noqon kartaa →